बलिउडमा टर्किस सुन्दरीको प्रवेश
बलिउडका कलाकार हलिउडमा प्रभुत्व जमाउने सपना देख्छन्। हलिउडमा प्रवेश पाउनुलाई जीवन सार्थक भएको उपलब्धि ठान्छन् तर अहिले शब्दकोष फेरिदै गएको छ। विदेशी कलाकार बलिउडतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। कटरिना केफ, ज्याकलिन फर्नान्डि�
एजेन्सी / बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा चलचित्र निर्माता, पशु अधिकारकर्मी र व्यवसायी पनि हुन्। उनी आफूमा भएको सकारात्मक विचारको प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खुशी फैलाउने काममा लागेकी छिन्। अनुष्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत �
करीनाको विना मेकअपको फोटो देखेर फ्यानको उड्यो होस !
एजेन्सी / भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर पछिल्लो समय आफ्ना पति सैफअली खान र छोरा तैमुरअली खानसँग लण्डनमा समय बिताइरहेकी छिन्। सैफ त्यहाँ आफ्नो अघिल्लो फिल्म &lsquo;जवानी जानेमन&rsquo; को छायांकन गरिरहेका छन्। करीना पनि शूटिङका सिलसिलाम�
एजेन्सी / पाकिस्तानमा एक निजी समारोहमा गीत गाउन गएको भन्दै भारतीय गायक मीका सिंहलाई बलिउडमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अल इण्डिया सिने वर्कर एसोसिएसन र फेडरेसन अफ वेस्टर्न इण्डिया सिने इम्प्लोइज मिलेर मीका सिंहविरुद्ध यस्तो निर�
एजेन्सी / आयुष्मान खुराना ती सेलिब्रिटीमध्ये एक हुन् जसले आफ्नो बलबुँतामा उद्योगमा ठाँउ बनाएका छन्। उनलाई उनको शानदार अभिनयका लागि नेशनल अवार्डसमेत दिइएको छ। यस्तोमा उनको चर्चा बढ्नु स्वभाविक नै हो। रिपोर्टलाई मान्ने हो भने
किन अस्वीकार गरिन् 'शिल्पाले १० करोडको अफर' ?
एजेन्सी / बलिउड अभिनेत्री सबैभन्दा बढी फिट रहेकी शिल्पा शेट्टी ४४ वर्षको उमेरमा पनि जवान देखिन्छिन्। उनी सफल चलचित्रमा उनले गरेका उत्कृष्ट अभिनय र फिटकै कारण सधैँ चर्चामा रहिरहन्छिन्। ४४ वर्षको उमेरसम्म पनि फिट रहेकी शिल्पा�
चारजना युवकले चर्चित अभिनेता कोमललाई कारबाट तानेर कुटे
एजेन्सी / कन्नड फिल्म अभिनेता कोमलमाथि बेंगलुरुमा कुटपिट भएको छ। वास्तवमा कोमल चढेको कारले ती युवकको बाइक सामान्य कोरेपछि रिसाएका युवकले उनीमाथि कथित रुपमा कुटपिट गरेका हुन्। पुलिसले यसबारे जानकारी दिएको हो। पुलिसका अनुसार
सलमानसँग विहे हुन लागेको हल्ला फिजाउने यि अभिनेत्री
एजेन्सी / बलिउड अभिनेता सलमानसँग आफ्नो विहे हुन लागेको विषयमा अभिनेत्री जरिन खानले हल्ला फिजाएर चर्चा बटुलेकी छिन्। सलमानकै चलचित्र वीर मार्फत बलिउडमा डेब्यू गरेकी जरिनाले सलमानसँगको विहे हुन लागेको कुरा हल्लाको रुपमा फैलि�
जरिन खानको खुलासा, ‘सलमान खानसँग मेरो विवाह हुँदैछ’
एजेन्सी / बलिउड फिल्म वीरबाट बलिउडमा डेब्यू गर्ने अभिनेत्री जरिन खानले बम्बे टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नो सलमान खानसँग विवाह हुन लागेको खुलासा गरेकी छिन् तर पछि उनले आफू ठट्टा गरिरहेको र यो कुरा हल्लाको रुपमा फैलिओस् �
मुम्बई / बलिउडको एक समयकी चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हाको निधन भएको भएको छ। ७१ वर्षीया सिन्हाको बिहीबार निधन भएको हो। मुम्बईको जुहूस्थित क्रिटीकेयर अस्पतालमा उनले आज करिब १२ बजे अन्तिम सास फेरेकी हुन्। समाचारले जनाए अनुसार �
एजेन्सी / मिलेनियल सुपरस्टार ऋतिक रोशन संसारकै हेयाण्डसम पुरुष बन्न सफल भएका छन्। रोशन अगस्ट २०१९ मा भएको &lsquo;टप ५ मोस्ट हेण्डसम मेन इन द वल्र्ड&rsquo; को शीर्ष स्थानमा पर्न सफल भएका हुन्। उनका ३० वटा फिल्म बक्स अफिसमा सुपरहिट बन्न सफ
काठमाण्डौ / अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोणको बलिउड र हलिउड दुवैतिर चर्चा हुन्छ। दुवैका संसारभर कैयौं फ्यान छन्। तर यी दुवै नायिको सामाजिक सञ्जालमा फेक फलोअर्स लिस्टको टप १० भित्र छन्। यी दुई अभिनेत्रीका अलावा क्रि�
विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या रायले गरेका ७ ठूला गल्ती
एजेन्सी / विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चनलाई बलिउडमा सफल र सुन्दर नायिकाको रुपमा लिइन्छ। साथै, उनी अभिनयमा पनि उत्तिकै पोख्त छिन्। ४० वर्ष नाघिसकेकी ऐश्वर्याको सुन्दरता अझै उस्तै आर्कषक छ। अभिषेक बच्चनसँग विहे गरेपछि फिल्म�
गुगलमा सर्वाधिक खोजी हुनेमा सन्नी लियोनी, भिडियोको खोजि धेरै !
एजेन्सी / गुगलको सर्वाधिक खोजी गरिने व्यक्तिमा सन्नी लियोनी परेकी छन्। यस वर्ष अगस्टसम्मको आँकडामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बलिउड अभिनेता सलमान खान तथा शाहरूख खानलाई पछि पर्दै लियोनी सर्वाधिक खोजी गरिने व्यक्तिम�
श्रींलकामा रिपोर्टिङ गर्ने ज्यकलिन कसरी बनिन् बलिउड स्टार ?
एजेन्सी / ज्याकलिन फर्नान्डिस बलिउडमा चर्चित नाम हो। उनी २००९ मा अलादीन फिल्मबाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी हुन्। सो फिल्ममा उनले अमिताभ बच्चन र रितेश देशमुखसँग स्क्रिन शेयर गरेकी थिइन्। ज्याकलिन फर्नान्डिसको जन्म ११ अगस्ट १९८५ म�
श्रीलंकाको समुन्द्रमा 'ज्याकलिनको बर्थ डे सेलिव्रेशन'
एजेन्सी / बलिउड नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेजले आज आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेकी छिन्। जन्मदिन मनाउन उनी आफ्नै देश श्रीलंका पुगेकी छिन्। उनले आफ्नो जन्मदिन शनिबारबाट नै सेलिब्रेट गरिरहेकी छिन्। शनिबारको दिन श्रीलंकाको समुन्द्री कि�
प्रकाशित मितिः श्रावण २६, २०७६
नेहा कक्करका नयाँ प्रेमी इन्डियन आइडलका प्रतियोगी !
एजेन्सी / बलिउडकी अहिलेकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर फेरी निजी खबरका कारण अहिले चर्चामा रहेकी छन्। केहि समय अघि आफ्ना लामो समयदेखिका प्रेमी हिमांशु कोहलीसँगको ब्रेकअपका कारण निकै चर्चामा आएकी थिइन्। ब्रेकअपका कारण नेहा डिप्रे
क्यामरा देखेर मुख लुकाउन थालिन् शिबानी, फरहान पनि देखिए बेचैन
एजेन्सी / फरहान अख्तर र शिबानी दांडेकरले आफ्नो सम्बन्धबारे केही नभनेपनि जबजब उनीहरु सँगे हिँड्छन् तब उनीहरु बीच केही चलिरहेको छ भन्ने भान हुन्छ। हालै फरहान र शिबानी मुम्बईको बान्द्रामा देखिए। दुबे एउटा कारभित्र थिए। तर जब शिब
बाहुबली अभिनेता मधु प्रकाशकी श्रीमतीले गरिन् आत्महत्या
एजेन्सी / फिल्म बाहुबलीबाट चर्चामा आएका अभिनेता मधु प्रकाशकी श्रीमती भारतीले आत्महत्या गरेकी छिन्। हंस इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार मधुकी श्रीमती भारतीले हैदराबादको आफ्नो घरमा पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छिन्। मधुको आत्म�
एजेन्सी / बलिउड अभिनेत्री एवं क्रिकेटर बिराट कोहलीकी पत्नी अनुष्का शर्मालाई गम्भीर रोग लागेको छ। त्यहि भएर हिजोआज प्रायः अस्पताल परिसर वरिपरी देखिन्छिन्। घेरैले अनुष्का गर्भवती भएकोले चेकजाँच गराउन अस्पताल पुगेको अड्कल गर�
प्रदेश १ मा मंगलबार थपिए ६ सय ११जना कोरोना संक्रमित
कोरोनाबाट एकैदिन एकहजार ७सय ७५जना संक्रमणमुक्त
सुनसरीमा मंगलबार(आज) रातीदेखि लकडाउन
धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शुरु गर्‍यो अनलाइन ओपिडी
प्रदेश नम्बर १ मा मात्र थपिए ६सय ७ जना कोरोना संक्रमित